Bụ na ị na araparawo ma na-eche ihe na-eme n'ihi na i furu efu ekwentị gị ma ọ ị bụ nke iru ka cellular ọrụ; ma ọ bụ ikekwe gị kwa ọnwa SMS ịgba na-depleted? Ndị a bụ ndị dị iche iche nke ọnọdụ mgbe gị na kọmputa na-aghọ otu n'ime ndị kasị bara uru akụ na i nwere. Gị mkpa itinye echegbu gị onwe. Ị nwere ike izipu ozi ederede site na kọmputa na-enweta ozi ederede na kọmputa. Ị ka pụrụ ekwurịta okwu na ndị enyi gị dị ka ogologo oge dị ka i nwere a PC. E nwere ọnụ ọgụgụ nke online ọrụ nke ga-eme ka i nwee izipu ozi ederede na n'okpuru na-isii ụzọ i nwere ike iji ma-eziga ederede site na kọmputa na-enweta ozi ederede na kọmputa.
# 1: Iji email na-SMS gateways
Ọ bụ omume na eziga na-enweta ozi ederede site na a onye na kọmputa na-a na ekwentị mkpanaaka site na SMS getaway. I nwere ike ime nke a site na iji email. Texts ga-eziga na ascii Text naanị mode. Ozi na-zitere iji na-abụghị ascii mode ma ọ bụ ndị na HTML mode ga-apụta dị na-akpa ọchị odide na nnata. N'ihu na-ezipụ ọ bụla ozi, ọ dị mkpa na ị maara nọmba ekwentị nnata na ngalaba nke ha na-eweta ọrụ. Nke a ga-eme ka i nwee n'ụzọ dị mfe inwe nri ọnụ ụzọ ámá adreesị ka ibugharịa ozi gị.
Ka izipu ozi, dị nnọọ eso ndị a dị mfe nzọụkwụ;
Gaa n'elu nri menu, pịa Email ma họrọ kọntaktị. Nke a ga-akpali gị tinye kọntaktị.
Tinye na kọntaktị nke nnata nke ozi gị n'ime gị email kọntaktị. A na-achọ na ị ama zọpụta kọntaktị gị email kọntaktị. Nzọụkwụ 3 ikpegara ozi gị. Nzọụkwụ mbụ bụ ikpegara ozi gị na gị email dị nnọọ ka unu nkịtị ụzọ nke ide na email. Nzọụkwụ 4 Ozugbo i nwere ozi gị njikere, nanị fanye nnata 10-ọbula ọnụ ọgụgụ na pịa zipu. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ izipu ozi a nọmba ekwentị serviced site AT & T na kọntaktị bụ +1 987-654-4321, mgbe ahụ SMS ga-zigara 9876544321@txt.att.net~~V.
I nwekwara ike izipu ozi (s) ọ bụla na ekwentị mkpanaaka na iji Skype Desktọpụ App. Ọ bụ omume izipu ozi ederede ka a ederede-nyeere ọtụtụ ma ọ bụ na-a Skype na kọntaktị na otu n'ime ndị a ederede-nyeere nọmba echekwara na profaịlụ. Iji zipụ SMS ederede ozi, ị dị nnọọ mkpa ka ihe ole na ole Skype Ebe E Si Nweta na ị na-ọma na-aga. Dị nnọọ eso ndị a dị mfe nzọụkwụ: Nzọụkwụ 1 Ihe mbụ na ị chọrọ ime bụ ịbanye na Skype si gị na desktọọpụ. Nzọụkwụ 2 Tinye kọntaktị ma ọ bụ nọmba. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ na-erubeghị echekwara na kọntaktị na ndepụta, na Skype toolbar, pịa na oku na-aga igwe akara ngosi. A Ịkpọ oku na mpe mpe akwa ga-egosipụta na n'akụkụ aka nri nke gị na ihuenyo.
Mgbe ahụ ọsịsọ nọmba.
Iji zipụ ozi, nri pịa na kọntaktị ma họrọ Zipụ SMS ozi iwu ma ọ bụ pịa site Skype iwu na mkparịta ụka igbe ma họrọ SMS.
A nzọụkwụ unu na-abanye ozi n'ime akakabarede igbe na pịa Send bọtịnụ. Ozi gị ga-eziga ka ekwentị nnata.
Otú e si enweta ozi site na iji Skype na PC gị na
Iji nweta ihe ọ bụla ozi zigara gị site na Skype na gị ozi, dị nnọọ nbanye gị Skype desktọọpụ ngwa, wee mepee ozi.
Wondershare MirrorGo nwekwara na-enye gị na Okporo ụzọ ga-ekwe ka ị eziga na-enweta SMS odide na gị onye na kọmputa. Lee ndị dị mfe nzọụkwụ na mkpa ka i soro. Nzọụkwụ 1 The ihe mbụ na-eme bụ iji jikọọ gị Smartphone gị na kọmputa. Nke a ga-ekwe ka ị na-eji dị mkpa functionalities nke MirrorGo. Ị nwere ike ma Jikọọ na-iji a USB njikọ ma ọ bụ site Wi-Fi. Nzọụkwụ 2 Ozugbo njikọ dị ihe ịga nke ọma, ị ga-enweta ihe interface nke ga-ekwe ka ị eziga na-enweta ozi na gị PC. Ebe i nwere ike iji PC keyboard pịnye na zipu ozi
I nwekwara ike iji Google Voice izipu na-enweta ozi. Ka izipu odide ndị e si onwe gị na kọmputa, ị kwesịrị iso mfe nzọụkwụ nyere n'okpuru.
Mbụ ị mkpa ike a Google Voice akaụntụ. Ka ịmepụta akaụntụ, pịa http://google.com/voice
Na kọmputa gị, na-emeghe Google Voice
Pịa na Text button na-achọta na op ekpe nke na peeji nke
Tinye nọmba ekwentị nnata n'ime "Iji" ubi.
Mgbe a na nzọụkwụ, dee gị ozi na Ozi ubi na pịa zipu.
Na-enweta a ederede-eziga ka gị site na Google olu, na-eso nzọụkwụ n'okpuru,
Na kọmputa gị, na-emeghe Google olu wee pịa on Ntọala na nri n'elu nke na-emeghe page.
On Ntọala, pịa oziolu & Text taabụ imeghe ya, mgbe ahụ, pịa na Text ebugharị ngalaba
Pịa na Gaanụ n'Ihu Ozi My Email na pịa Chekwa mgbanwe taabụ.
# 5: Iji iMessages
iMessage a abụghị nnọọ ekwentị ngwa. I nwekwara ike iji nke a ngwa na kọmputa gị na-eziga na-enweta ozi. Ka izipu ozi gị iji iMessages, ebe a bụ ihe ị chọrọ ime.
Mepee iMessages ngwa na desktọpụ gị
Tinye nọmba ekwentị gị nnata na Iji taabụ.
Pịnye gị ozi wee pịa Send button na ya zipu ozi.
# 6: Text site wireless na-eweta ọrụ si website
The web taa jupụtara wireless enye ọrụ. Ị nwere ike ịhọrọ eziga na-enweta ozi site na ị na-a wireless na-eweta ọrụ si website. Nke a na-akparaghị ókè SMS weebụsaịtị na-enye gị ohere iji eziga na-enweta odide na mpaghara na mba. Nzọụkwụ na-eziga SMS site a wireless ozi ederede eweta Nzọụkwụ 1: Abanye na, ma ọ bụ aha gị akaụntụ Kasị SMS ọrụ weebụsaịtị ga-mkpa gị ka aha akaụntụ na ha iji nweta ọrụ ha. N'ihi nke a, ị nwere ike na ọsọ ọsọ gị adreesị email gị ma ọ bụ mobile nọmba ekwentị. Nzọụkwụ 2: Tinye nọmba mkpa ka ị na eziga ozi.
Ọtụtụ n'ime ndị a weebụsaịtị na-arịọ gị maka mobile nọmba ekwentị nke nnata na ndọtị nke a na nọmba ekwentị. Ụfọdụ n'ime ha na-eje ozi akpan akpan ebu naanị - otú ijide n'aka na ego ha.
Nzọụkwụ 3: Pịnye ozi na-ezite ya
Mgbe a na isi, nanị pịnyere SMS na pịa "zipụ" button.
Olee otú Mee na mbupụ a ngosi mmịfe na Lightroom 3
iPhoto ka Picasa: Export iPhoto Pictures ka Picasa Albums
> Resource> Atụmatụ> 6 Ụzọ eziga na-enweta ozi ederede na Computer